के तपाईलाई थाहा छ कुकुरले रुख, खम्बा, भित्ता या टायरमै किन गर्छ पिसाब ? | Rajmarga
के तपाईलाई थाहा छ कुकुरले रुख, खम्बा, भित्ता या टायरमै किन गर्छ पिसाब ?
कुकुरले पिसाब गरेको त हामी सबैले देखेकै छौं । कुकुरहरु रुख वा खम्बा, भित्ता र टायरमा एउटा खुट्टा उचालेरै पिसाब गर्छन् । तर, कुकुरको पिसाब फेर्ने यो बानीबारे सबैलाई थाहा भए पनि, खास किन यस्तो गर्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ अधिकांश अनविज्ञ नै हुनु पर्छ ।
त्यसो त कुकुरको यस्तो बानीबारे जान्ने कोशिश पनि हामीले कहिल्यै गरेनौं कि ! खासमा यसको रहस्य के हो त ?
कुकुरलाई जति नै अग्लो ठाउँमा राखिदिए पनि उसले खम्बा, भित्ता र टायरमै पिसाब गर्न खोज्छ् । अर्थात् केही अग्लो ठाउँमा आफ्नो पिसाब छाड्न चाहन्छ । यसो गर्नुको वैज्ञानिक तर्क यस्तो छ– कुकुरले सधैँ आफ्नो नाकको उचाइमा पिसाब गर्छ । त्यसैले नै केही उचाई खोज्छ । यसो गर्नुको मतलब हो उसले अन्य कुकुरको लागि आफ्नो गन्ध सजिलै छाड्न सकोस् ।
हरेक कुकुर आफ्नो इलाकामा अन्य कुकुरका लागि दादागिरी प्रस्तुत गर्छन् । त्यसो त इलाकामा मिल्ने कुकुर पनि हुन्छन् । आफ्नो समुह र समुहबाहिरका कुकुरलाई आफ्नो उपस्थिति त्यस इलाकामा देखाउन कुकुरले पिसाबको गन्धलाई निशानीको रुपमा छोड्छ ।
Previous post: आश्माको ‘डामी तो कोसीता’ च्यालेन्ज विश्वभर भाइरल,देश विदेश बाट तारिफ नै तारिफ
Next post: ​आखिर आफ्नो ब्रा किन यहाँ छाड्छन् हजारौँ युवतीहरू ?
जुन जंगलबाट आजसम्म कोही जिउँदो फर्किएन, त्यही जंगलमा हराए ३ वर्षका बालक
बगैंचा बनाउन जमिन खन्दा २५ फिटमुनि भेटियो सुरुङजस्तै बाटो, भित्रको दृश्यले उड्यो होस
एक महिलाले उस्तै अनुहार भएका १७ बच्चालाई जन्म दिएको कहानी भाइरल